Exodus 27 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Afɔremuka a wɔbɔ ɔhyew afɔre wɔ so (1-8)
Ngo a wɔde begu kaneadua no mu (20, 21)
27 “Fa ɔkanto dua yɛ afɔremuka no;+ ma ne tenten nyɛ basafa* anum, na ne tɛtrɛtɛ nyɛ basafa anum. Ma n’afã anan nyinaa nyɛ pɛ, na efi soro besi fam nyɛ basafa abiɛsa.+ 2 Yɛ mmɛn+ wɔ ntwea anan no so. Yɛ afɔremuka ne mmɛn no nyinaa bom. Fa kɔbere fa afɔremuka no ho.+ 3 Yɛ ade a wɔde nsõ* begu mu akɔtow agu, na yɛ sofi, nkankyee, adinam, ne nkankyee a wɔde ogya gu mu. Nneɛma a wɔde bɛyɛ adwuma wɔ ho nyinaa, fa kɔbere yɛ.+ 4 Afei fa kɔbere yɛ nkantankantan, na fa bi yɛ nkawa anan wɔ nkantankantan no ntwea anan no so. 5 Fa nkantankantan no hyɛ afɔremuka no mu ma enkodu mfinimfini. 6 Fa ɔkanto sen nnua nteaanteaa ma afɔremuka no, na fa kɔbere fa ho. 7 Wode nnua no bɛhyehyɛ nkawa a ɛwɔ n’afãnu no mu, na ɛno na wɔde bɛsoa.+ 8 Fa nnua yɛ no sɛ adaka a enni mmuaso. Yɛ no sɛnea ɔkyerɛɛ wo wɔ bepɔw no so no.+ 9 “Yɛ adiwo+ wɔ ɔsom ntamadan no ho. Fa hama papa a wɔde yɛ nwera yɛ ntama sensɛn adiwo no fã a ɛhwɛ anaafo fam no; ɛhɔ de no, ma ne tenten nyɛ basafa 100.+ 10 Ebenya adum 20 ne kɔbere nnyinaso 20. Fa dwetɛ yɛ adum no nsusomu ne ne nkawa. 11 Atifi fam nso, ntama a ɛbɛsensɛn hɔ no tenten bɛyɛ basafa 100, na ebenya adum 20 ne kɔbere nnyinaso 20 ne ɛho nsusomu ne ne nkawa a wɔde dwetɛ ayɛ. 12 Adiwo no fã a ɛhwɛ atɔe fam no, fa ntama a ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa 50 sɛn hɔ, na fa adum du sisi nnyinaso du so. 13 Adiwo no fã a ɛhwɛ apuei fam no nso, ma ne tɛtrɛtɛ nyɛ basafa 50. 14 Fa ntama a ne tenten yɛ basafa 15 sɛn hɔ, na ma ennya adum abiɛsa a esisi nnyinaso abiɛsa so+ wɔ ɔfã baako. 15 Ɔfã noho nso, fa ntama a ne tenten yɛ basafa 15 sɛn hɔ, na ma ennya adum abiɛsa a esisi nnyinaso abiɛsa so. 16 “Adiwo no kwan ano nso, fa ntama* a ne tenten yɛ basafa 20 sɛn hɔ. Nea wode bɛyɛ ni: Hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera;+ ma ennya adum anan a esisi nnyinaso anan so.+ 17 Adum a atwa adiwo no ho ahyia nyinaa ho nsusomu ne ne nkawa nyinaa, fa dwetɛ yɛ. Adum no nnyinaso de, fa kɔbere yɛ.+ 18 Ma adiwo no tenten nyɛ basafa 100+ na ne tɛtrɛtɛ nyɛ basafa 50, na nwera pa a ɛsensɛn hɔ no, efi soro besi fam no, ma ɛnyɛ basafa 5. Fa kɔbere yɛ adum no nnyinaso. 19 Nneɛma a wɔde bɛyɛ adwuma wɔ ɔsom ntamadan no mu nyinaa, ne nea wɔde bɛbobom atim fam nyinaa, fa kɔbere yɛ. Afei nso, nea wɔde bɛbobɔ adiwo no ntama mu atim fam nyinaa, fa kɔbere yɛ.+ 20 “Ka kyerɛ Israelfo no na wɔmma wo ngo kurennyenn a efi ngodua mu; ɛno na wɔde begu nkanea no mu sɛnea ɛbɛyɛ a ebesi so daa a ɛrennum.+ 21 Ahyiae ntamadan no nkanea a ɛwɔ ntwamutam no akyi wɔ Adanse Adaka+ no abɔnten no, Aaron ne ne mma bɛhwɛ sɛ esi so fi anwummere kosi anɔpa wɔ Yehowa anim.+ Ɛyɛ ahyɛde a Israelfo bedi so daa wɔ wɔn awo ntoatoaso nyinaa mu.+
^ Anaa “srade nsõ,” kyerɛ sɛ, nsõ ne mmoa srade a adi afra.